तपाईंको फिर्ता कसरी सीधा गर्न
एक सीधा फिर्ता छ मानिस बारेमा, काँध सोझो र उनको टाउको उच्च आयोजित तिनीहरूले भन्न - यो रीगल असर हो। यो hunched वा lopsided bumpkin भन्दा यी मानिसहरू हेर्न धेरै सुखद छ कि सहमत हुनुहुन्छ। को XIX सताब्दी मा रूसी आचरण फिर्ता अभ्यास छैन विदेशी अपरेसन सीधा, त्यसैले ध्यान धेरै रोकथाम भुक्तान। एक प्रारम्भिक उमेर बच्चाहरु राम्ररी खडा र बस्न कसरी देखाएका छन् बाट, आफूलाई पछि हेर्न र लगातार पेट मांसपेशीमा निगरानी गर्न सिकाउनुभयो थिए। stooped र आचरण बीच फिर्ता टेढो जवान पुस्ता हेरचाह को एक परिणाम रूपमा नियम अपवाद थिए। Tragically हाम्रो समय मा डाक्टर प्रश्न "आफ्नो फिर्ता कसरी सीधा गर्न?" मुख्य डान्सरहरू हो mannequins मा सेट, तर यस्तो "trifles" को विशाल बहुमत पनि लाग्छ छैन।
तर सीधा फिर्ता - यो राम्रो मुद्रा को मात्र होइन एक ग्यारेन्टी, तर पनि मेरुदण्ड र आन्तरिक अङ्गहरूको रोगहरु को एक पूरी गुच्छा को रोकथाम छ। त्यसैले musculature स्थिति, सामान्य स्थिति मा समर्थन रिज, लगभग सबै प्रमुख अंग प्रणाली को काम मा सिधै निर्भर।
यो फिर्ता सीधा गर्न सम्भव छ, धेरै वर्ष स्थिर झुकाव भोगे? कुरा साँच्चै सुरु गर्दा तपाईं आफ्नो मुद्रा समाधान गर्न सक्छन्? गरेको छानबिन गरौं।
, तपाईंले आफ्नो फिर्ता सीधा कसरी प्रश्न सेट गर्न बानी को समेकन गर्न नेतृत्व गरेको छ के झुकन अघि बुझ्न प्रयास गर्नुपर्छ। यो तपाईं गरिब मुद्रा को कारण पहिचान गर्दा, यो समस्या को स्रोत को समाप्त गर्न जान सजिलो हुनेछ सम्भव छ। त्यसैले गरेको एक सामान्य, सुन्दर फिर्ता, कि व्यक्ति kyphosis, scoliosis, र अन्य "eskers" मा बढ्दै प्रक्रिया मा mutating, जन्म मा प्राप्त कसरी बुझ्न प्रयास गरौं।
पहिले, पहिले नै उल्लेख रूपमा, मुख्य कारण - कमजोर मांसपेशीमा। कारण वास्तवमा आफ्नो मांसपेशीमा कमजोर सार्न कि आधुनिक मान्छे कम कारण गर्न, र प्रत्येक नयाँ पुस्ता संग, स्थिति मात्र बढ्दै छ। मांसपेशी कस्तो (, यो, दुर्भाग्यवश, खेल होइन छ फुटबल टोलीको मज्जा) हामी अब गाडी, आसीन काम, टीवी वा कम्प्युटर, एउटा खेल लागि तरस को अभाव मा फैटी खाद्य पदार्थ को प्रशस्त छ भने, भन्न सकिन्छ। 100-200 वर्ष पहिले अस्तित्व कि एक साथ यस तस्वीर तुलना गर्नुहोस्। कुनै फोन र कम्प्युटर, दृष्टि मा थिएनन् मान्छे घोडाहरू चढेर वा हिंडे। लोकप्रिय अवकाश गतिविधिहरु शिकार थिए noblemen र माछा मार्ने गर्छन्। यो किसान खेतमा काम गरे। र शारीरिक गतिविधि यी प्रकार को सबै गर्दा, मांसपेशिहरु आफूलाई बलियो छन्, र एजेन्डा मा बस छैन, फिर्ता सीधा कसरी प्रश्न। किन प्रारम्भिक उमेर देखि कि सीधा, र यति निर्देशन? दुर्भाग्यवश अहिले यो एकदम फरक।
दोश्रो, लोड वितरण र सही बस्न हाम्रो नसक्नुको लागि दोष। पहिलो बिन्दु मात्र समस्या झनै चर्काउने। को झुकाव मुद्रा को शीर्षमा एक बढावा मा अनुचित मुद्रा परिणाम संग संयोजन कमजोर मांसपेशीमा। र अब एक व्यक्ति बसिरहेका छ वा गलत स्थितिमा काम, मजबूत र झुकाव निश्चित छ, र यो सामना गर्न पछि पनि गाह्रो।
तर यो त आशाहीन अवस्था साँच्चै हो?
कुनै आशाहीन अवस्थामा छन्, यो त्यहाँ तिनीहरूलाई सामना गर्न कुनै इच्छा छ भन्ने छ। त्यसैले गरेको लक्ष्य गर्न बाटो के हो हेर्न दिनुहोस्। तपाईंको फिर्ता कसरी सीधा गर्न सिक्न - तर हामी एक लक्ष्य छ। विशेष व्यायाम - यो लक्ष्य हासिल गर्न सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा विश्वसनीय तरिका हो।
फिर्ता सीधा गर्न अभ्यास
एक कुर्सी मा बस्न, खुट्टा दृढ तल्ला गर्न, फिर्ता सीधा थिचिएको। तपाईं सीधा हेर्न र यो कण्ठ गर्दा उनको टाउको सार्दा बिना अगाडी चिबुक खींच सुरु सम्झना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। 10 पटक चलाउनुहोस्।
पहिलो तालिका मा सुरु स्थिति, अधिकतम मुर्कुट्टा यसरी दृढता ब्लेड सँगै लाने, माथि कोरिएका छन्। 10 पटक चलाउनुहोस्।
एउटै सुरुवात स्थिति अलिकति पनि सास मा फिर्ता फ्लेक्स, एकै समयमा देखि, सँगै रूपमा ब्लेड को सकेसम्म धेरै पुल गर्न प्रयास, तल काँध ड्रप। को Exhale मा, पेट मजबूत र प्रारम्भिक स्थिति रिटर्न 10 पटक चलाउनुहोस्।
एक गणनामा स्थिति मा आफ्नो फिर्ता सीधा, हतियार र कोहनी मा मोड, Palms लक मा संलग्न र एक ब्लेड द्वारा एक भन्दा बढी तिनीहरूलाई गर्दछ। 10 पटक चलाउनुहोस्।
नियमित जस्तै सरल अभ्यास गर्दै, तपाईंले आफ्नो मुद्रा सीधा गर्न सक्छन् र एकदम आफ्नो स्वास्थ्य सुधार। मुख्य कुरा - अल्छी हुन र तिनीहरूलाई के छैन।
ग्रीवा नहर - यो के हो र यसको कार्य के हो?
को जीनस Candida को खमीर-जस्तो Fungi
मूत्र स्पष्ट - राम्रो सूचक
उपयोगी र सरल stretching अभ्यास
महिला मा यौनजन्य रोगहरू: लक्षण, निदान, नतिजा
बच्चा बढेको eosinophils: यो कस्तो अर्थ राख्छ?
जीवित कोठा मा फर्नीचर को व्यवस्था प्रमुख पक्षहरू
अस्पताल "ASSY" (Bashkiria) सरकारी वेबसाइट, मूल्य, समीक्षा र फोटो। स्वास्थ्य रिसोर्ट "ASSY" प्राप्त कसरी?
होटल "Albatros बीच Resort Hurghada4*" (बीच Albatros Resort): होटल को वर्णन, मूल्यांकन
Panasonic Breadmaker: वर्णन, निर्देशन
र कसरी किन रोटी स्थिर? स्थिर रोटी र रोटी सबै रहस्य
अघिल्लो वर्ष को सबै भन्दा लोकप्रिय पाक सिर्जनाहरू
"प्राटाटल एमबी": हृदयविज्ञापन र रोगीहरूको समीक्षा। "प्राटाटल एमबी": प्रयोग, मूल्य र समीक्षाका लागि निर्देशन
अन्डा एलर्जी: लक्षण, रोकथाम, उपचार
Serpentshrine गुफा र लेडी Vashj कहाँ छ?
छुट्टीको कजान लेक छनौट
सर्जियो Stallone: फोटो, जीवनी